किन पक्राउ परे ‘दैनिक मानसखण्ड’ का पत्रकार भण्डारी र भट्ट? यस्तो छ घटनाको नालीबेली – Media Kurakani
June 17th, 2017 Media Kurakani Media News
प्रहरीले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट प्रकाशित हुने ‘दैनिक मानसखण्ड’ पत्रिकाका प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक खेम भण्डारी र कार्यकारी सम्पादक जी. भट्टलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले शनिबार दिउसो फरक फरक ठाउँबाट भण्डारी र भट्टलाई पक्राउ गरेको हो।
भण्डारी भीमदत्त नगरपालिका १८ कटानस्थित पत्रिकाको कार्यालयबाट पक्राउ परेका हुन् भने कार्यकारी सम्पादक भट्ट महेन्द्रनगर बजारबाट पक्राउ परेका हुन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारी रेडियो महाकालीका कार्यकारी निर्देशक पनि हुन्। भट्ट कारोबार दैनिकका कञ्चनपुर सम्वाददाता पनि हुन्। अपडेटः पत्रकार खेम भण्डारी र गणेश भट्ट २८ घण्टापछि रिहा
किन पक्राउ परे?
‘दैनिक मानसखण्ड’ का प्रधान सम्पादक र कार्यकारी सम्पादक पक्राउ पर्नुको सम्बन्ध उक्त पत्रिकामा छापिएको समाचार सामग्री भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।
कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक भीम बहादुर दाहालका अनुसार पत्रिकामा छापिएको समाचारले आफ्नो चरित्रहत्या गरेको तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा असर परेको भन्दै एक युवतीका अभिभावकले उजुरी गरेपछि भण्डारी र भट्टलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो। दाहालका अनुसार उजुरीकर्ताले समाचारकै कारण आफ्नी छोरीको बिहे समेत भाँडिएको आरोप लगाएका छन्।
केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन २०२७ को दफा २ (ञ) अनुसार उजुरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। ऐनको यो दफामा ‘कसैलाई डर, त्रास वा दुःख दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने वा हैरानी गर्ने हेतुले टेलिफोन, चिठ्ठीपत्र वा अन्य कुनै साधन वा माध्यमद्वारा धम्की वा गाली दिने वा जिस्क्याउने वा अन्य कुनै अनुचित काम कुरा गर्ने’ लाई सार्वजनिक अपराध भनिएको छ।
गत शनिबार प्रहरीले दुई युवतीलाई पक्राउ गर्छ। भण्डारी प्रधान सम्पादक रहेको पत्रिकाले प्रहरीले निर्दोष युवतीहरूलाई पक्राउ गरेर ज्यादती गरेको भन्दै उक्त घटनाबारे लगातार समाचार प्रकाशित गर्छ।
तर केही दिनमै पक्राउ परेका युवतीका परिवारबाट उजुरी आउँछ- पीडितको नाम सार्वजनिक गरेर पत्रिकाले आफूहरूको चरित्र हत्या भयो। त्यसपछि प्रधान सम्पादक भण्डारी र कार्यकारी सम्पादक भट्ट पक्राउ पर्छन्। छोटकरीमा भएको यत्ति हो।
युवतीहरूलाई किन गरिएको थियो पक्राउ?
उज्यालो अनलाइनका अनुसार प्रहरीले जेठ २७ गते मदिरा खाएर रातिमा होहल्ला गरेको आरोपमा महेन्द्रनगर बसपार्कमा होटल सञ्चालन गर्ने दुईजनालाई गिरफ्तार गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाएको थियो। त्यस विषयमा दैनिक मानसखण्डले जेठ २७ गते ‘कञ्चनपुरका एसपिमाथी २ युवती अपहरणको आरोप’ भन्ने शीर्षकमा एसपिले खाजा खान बोलाउदा नगएकाले युवतीको अपहरण भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो।
दैनिक मानसखण्ड पत्रिकामा छापिएको यो केससँग जोडिएको पहिलो समाचार हो- कञ्चनपुरका एसपीमाथि २ युवती अपहरणको आरोप।
यो समाचारमा प्रत्यक्षदर्शीको हवाला दिँदै प्रहरीले ‘फिल्मी शैली/अपहरणको शैली/ अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले’ होटल व्यवसाय गर्ने दुई युवतीलाई पक्राउ गरिएको लेखिएको छ। दुई युवतीसँगै अर्का एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भए पनि उनी को हुन् भन्ने प्रहरीले गोप्य राखेको समाचारमा उल्लेख छ। पछि बुझ्न खोज्दा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रवक्तादेखि अन्यको मोबाइल अफ भएको समाचारमा उल्लेख छ। समाचारमा पक्राउ परेका भनिएका दुईजनाको नाम र बसोबासको लोकेसन पनि खुलाइएको छ।
पक्राउ परेका दुई युवतीलाई जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रकाश चन्दले शनिबार दिउसो खाजा खान बोलाएको तर ती युवतीहरू नगएको दावी समाचारमा गरिएको छ। ती युवतीहरूका आफन्तको हवाला दिँदै समाचारमा ‘यसअघि लगातार तीन दिन दुबै युवतीलाई केही घण्टा हिरासतमा राखेर छोडिएको’ दावी गरिएको छ। एसपी चन्दले यसअघि पनि ती युवतीहरूलाई बारम्बार फोन गरेर कहिले खाजा त कहिले खानाको अफर गर्ने गरेको दावी समाचारमा छ।
कानुन व्यवसायी विनोद भट्टले युवतीहरू गिरफ्तार भएलगत्तै सोधपुछ तथा खोजतलास गरेको उल्लेख गर्दै उनलाई उद्‍धृत गरिएको छ- ‘बाराम्बार फोन गर्ने, आउन नमानेपछि जिप्रका झिकाउने गरेको पृष्ठभूमिमा आज गरिएको पक्राउ अपहरण हो।’ उनकै भनाईका आधारमा दुई युवतीको अपहरणको भएको पुष्टि भएको निष्कर्ष समाचारमा निकालिएको छ।
भोलिपल्ट अर्को समाचार छापिएको छ- दुई युवती ‘अपहरण’ प्रकरण : प्रहरी उत्रियो फिल्मी शैलीमा
‘प्रहरीद्वारा शनिबार साँझ महेन्द्रनगरका दुई कामकाजी युवतीलाई ‘अपहरण’ गरिएको घटना झन् रहस्यमयी बनेको’ उक्त समाचारमा उल्लेख छ। आइतबार दिनभरिका घटनाक्रम, प्रहरीको दावी र घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शीको कथनले घटना रहस्यमयी बनेको समाचारमा उल्लेख छ।
समाचारमा प्रहरीले उक्त घटनाबारे गरेको पत्रकार सम्मेलनको चर्चा गरिएको छ। आइतबार दिउसो जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी ती दुई युवतीसँगै पक्राउ परेका युवकको नाम अभिलेख खड्का रहेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एसपी चन्दले हिरासतमा रहेका तीनै जनाले मदिरा सेवन गरी होहल्ला गरेकोले पक्राउ गरिएको जनाएका छन्। ती दुई युवती र युवकले मदिरा सेवन गरी सशस्त्र प्रहरी गुल्मको गस्तीलाई गालिगलौज गरेपछि पक्राउ गरिएको चन्दले बताएको समाचारमा उल्लेख छ। उनीहरूलाई सार्वजनिक अपराध कसुरमा सात दिनको म्याद लिई थुनामा राखिएको समाचारमा उल्लेख छ।
समाचारमा एसपी चन्दले ती युवतीहरूलाई खाजा खान अफर गरेको प्रशंग उठाउँदै ती युवतीका आफन्तलाई उद्धृत गरिएको छ- ‘पटक पटक खाजा खान बोलाउने नियतको पर्दाफास नहोस् भनेर थुनामा राख्ने र मुखमा बुझो लगाउने प्रयास हुँदैछ।’
समाचारमा सशस्त्र प्रहरी गुल्म स्रोत, कतिपय बेनामे प्रत्यक्षदर्शी र अनु कार्की नामकी प्रत्यक्षदर्शीको हवाला दिँदै ती युवतीहरूले होहल्ला र प्रहरीलाई गालीगलौज गरेको भन्ने प्रहरीको दावी झूठो भएको उल्लेख गरिएको छ।
समाचारमा पक्राउ परेकी मध्ये एक युवतीले भनेकी छन्- ‘हामी दुई र अभिलेख (सँगै पक्राउ परेका युवक) बाटोमा हिँडिरहेका बेला एकजना आएर हामीलाई जिस्क्यायो। अभिलेखले त्यसलाई गाली गरेपछि ऊ भाग्यो। केही छिनमा त्यो मान्छेले प्रहरीको गाडी ल्याएर आयो। प्रहरीले उल्टै हामीलाई गाडीमा हालेर यहाँ ल्याई थुन्यो।’
तेस्रो दिन दैनिक मानसखण्डले कञ्चन र पूजालाई कठोर हिरासत : दालमा कालो छ ! शीर्षकमा टिप्पणी प्रकाशित गरेको छ।
‘फिल्मी शैलीमा गरिएको धरपकड झन् रहस्यमयी बन्दै गएको’ उल्लेख गर्दै उक्त सामग्रीमा भनिएको छ- प्रहरीले मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गरेको भन्दै ती तीनजनालाई पक्राउ गरेको दावी गरे पनि वास्तविकता भने त्यति मामुली नभएको आशंका गर्ने प्रशस्त छिद्रहरु देखा परेका छन्। पक्राउ गर्नुअघि र पक्राउ गरिसकेपछि प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरुको व्यवहार र गतिविधिले ‘दालमा कालो’ भएको प्रष्ट संकेत गरिरहेका छन्।
‘संकटकालको झल्को दिने गरी गरिएको गिरफ्तारी र संकटकालमा झैँ बाहिरी सम्पर्कबाट थुनुवालाई विच्छेद गरिनुले प्रकरण झन् रहस्यमयी बन्दै गएको’ तर्क गर्दै उक्त सामग्रीमा भनिएको छ- समग्र घटनाक्रम हेर्दा ‘दालमा कालो’ संकेत पाइएको छ। पक्राउ परेका तीनैजनाको कुनै ठूलो प्रकरणमा संलग्नता रहेको र अनुसन्धान लुकाउन सार्वजनिक मुद्दाको आड लिइएको हो भने अर्कै कुरा हो अन्यथा एसपी चन्दको मनपरीतन्त्र बाहेक घटनाक्रमले अरु पुष्टि नहुने देखाउँछ।‘
प्रहरीमाथि नै शंका गर्दै ‘लहरो तान्दा पहरो जान सक्ने संकेत’ उपशीर्षकमा उक्त टिप्पणीमा भनिएको छ- ‘उनीहरु (पक्राउ परेका युवती) लाई सञ्चारकर्मी वा मानवअधिकारकर्मीहरूसँग खुलेर कुरा गर्न दिइएमा धेरै कुरा खुल्ने सम्भावना देखिन्छ।…. उनीहरूलाई थुनेर मुखमा बुझो लगाउने तिकडम पनि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन।‘
मंगलबार प्रकाशित पूजा र कञ्चन अझै कालकोठरीमा : कता हराए अधिकारकर्मी? शीर्षकको समाचारमा पक्राउ परेका युवतीहरूलाई कानुन व्यवसायी राख्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित गरिएको उल्लेख छ। एक बेनामे प्रहरीलाई उद्‍धृद गर्दै उनीहरूलाई कसैसँग भेट्न समेत नदिइएको दावी समाचारमा गरिएको छ। एसपी चन्दसँग जानकारी लिन खोज्दा ‘तपाईँ बढ्ता नहुनुस् है’ भन्दै उनले फोन काटिदिएको समाचारमा उल्लेख छ। तर डीएसपी भीमप्रसाद दाहालले भने थुनुवालाई भेट्न दिइएको बताएको समाचारमै उल्लेख छ।
ती युवतीहरूलाई पक्राउ गरेको तीन दिन बितिसक्दा पनि स्थानीय मानवअधिकारकर्मी र महिला अधिकारवादीको ध्यानाकर्षण नभएको उल्लेख छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सहित पत्रकारका संस्थाहरूले पत्रकारद्वय भण्डारी र भट्टको रिहाईको माग गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति निकालेर समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरीले पत्रकारलाई गिरफ्तार गरी सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाउनुलाई आश्चर्य र खेदजनक भनेको छ।
केही दिन अघि स्थानीय दुइ युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विषयमा सो पत्रिकाले ती युवती निर्दोष भएको तर प्रहरीले ज्यादतिपूर्वक पक्राउ गरेर थुनामा राखेको आशयको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। पत्रिकाले एकपक्षीयरुपमा प्रहरीलाई आक्षेप लगाएको गुनासो जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट आएकोमा त्यसको बारेमा छलफल पनि भएको हो। तर, अहिले नाटकीय रुपमा थुनामा राखिएका युवतीका आफन्तले उजुरी दिएको भन्दै दुइ सम्पादकलाई गिरफ्तार गरिएछ। यो विल्कुल गलत र प्रतिशोधपूर्ण काम हो, शक्तिको दुरुपयोग र स्वतन्त्र प्रेस विरुद्धको आक्रमण हो। समाचारको विषयलाई लिएर भएको यस्तो गलत कार्य रोक्न गृहमन्त्री तथा जिल्ला प्रशासन प्रमुख एवं जिल्ला र अञ्चलका प्रहरी प्रमुखसँग पनि कुरा भएको हो। तर, अझै पनि ती पत्रकारलाई रिहा नगरिनुले अनेक प्रश्न उठाएको छ। यसले वर्तमान सरकारको प्रेसप्रतिको दृष्टिकोणमै शंका जन्माएको छ। महासंघले उहाँहरुको तत्काल रिहा नगरिए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन स्थानीय शाखालाई भनिसकेको छ। केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्रीय संयोजकको नेतृत्वमा केन्द्रीय टोली पनि कञ्चनपुर पुगिसकेको छ। वार्ता पनि भएका छन् तर निश्कर्षमा पुगेको छैन। सरकार र स्थानीय प्रशासनले यो विषयलाई सामान्यरुपमा लिने प्रयास नगरुन्।
पत्रकार गणेश कञ्चन भारतीका अनुसार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पक्राउ परेका पत्रकारद्वयलाई तत्काल रिहा गर्न आफूले नेपाल प्रहरीका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।
र, अनुत्तरित प्रश्न
दुई युवती पक्राउ परेको घटनामा ‘दैनिक मानसखण्ड’ ले प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठाएकोमात्र छैन, हात धोएर प्रहरीलाई गलत साबित गर्न लागिपरेको देखिन्छ।
पत्रकार महासंघबाट दीपेन्द्र कुँवरले दिए राजीनामा, नेतृत्व अपारदर्शी भएको आरोप »
« पत्रकार खेम भण्डारी र गणेश भट्ट २८ घण्टापछि रिहा
पत्रकार खेम भण्डारी र गणेश भट्ट २८ घण्टापछि रिहा – Media Kurakani (#)